विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको निरन्तरता होला ? - Sagarmatha Online News Portal
शिव फुयाल । नेपालका धेरै राजनैतिक नियुक्तिमा जनताले खासै चासो राखेको देखिएको थिएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पनि यो भन्दा अगाडीको नियुक्तिमा कसैको चासो थिएन ।
दैनिक १८ घण्टा बत्ति हुदैन थियो । लोडसेडिङको तालिका लिनको लागि आम नागरिक हारालुछ गर्थे । कुन बेला बत्ती आउने हो । पत्तै पाईदैन थियो । मुकेश काफ्ले हटेपछि तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरे ।
त्यो भन्दा अगाडी राधा ज्ञावली उर्जा मन्त्री हुदा कुलमानलाई कुनै जिम्मेवारी दिएको थिएन । कुलमान विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि कुरा होईन काम गर्न थाले । देशलाई विस्तारै अध्याँरोबाट उज्यालो नेपाल बनाउन सफल भए ।
कुलमानले हल्लाखल्ला नगरि बत्ति दिन थाले । त्यो वर्षको तिहारमा पुरै बत्ति बाल्न दिएर सबैलाई चकित पारे । केहि नभनि बिस्तारै लोडसेडिङ अन्त्य गरे । साना उधोग देखि ठूला सबैले आफुलाई राहात महसुस गरे । त्यतेबेला काफ्ले सरले धम्किको भाषामा भने ‘यो हिउँदभरी बत्ती बले म सार्वजैनिक पदमा कहिल्यै जाने छैन । कुलेखानिको रिजभ सकाउदै छन् । अब त दुई घण्टा पनि बत्ति बल्ने छैन’ भनेर भविष्यवाणी गरे ।
प्राधिकरणकै ट्रेड युनियनहरुले कार्यालय जान नदिने भनेर तालाबन्दी गर्न थाले त्यो असहयोगमा जनताले प्रतिरोध गरेर उनि टिक्न सकेका हुन् । उनले उज्यालो नेपाल मात्र बनाएनन् । ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको विद्युत प्राधिकरणलाई ११ अर्वभन्दा बढि नाफामा लगे ।
अहिलेका राजनैतिक नियुक्ति हेर्दा धेरै घिन लाग्दो छ । सरकारले कुनैबेला कालो सूचिमा राखेका बिचौलियाहरु मेनपावर खोलेर ठग्नेहरु जहा जान्छन् त्यही भष्म बनाउनेहरु यति समूहका या ओम्नी समूहका मानिसहरुले जसरी राजनैतिक नियुक्ति पाईरहेका छन् । त्यो हेर्दा आफ्नो कार्यकाल सफल भएका कुलमानलाई पुनः नियुक्ति नगर्ने संभावना धेरै देखेरै कलाकार उद्योगी व्यवसायी र आम मानिसको चासोको विषय बन्यो । र, विभिन्न समाजिक सञ्जाल मार्फत नैतिक दवाव दिई रहेका छन् । रमेश शिलवाल र माधव ढुगेलहरुको नियुक्ति दोहोरिन्छ । तर कुलमानहरुको दोहोरिन गाह्रो देखिदै छ । त्यसो हुनुको कारण राजनैतिक भ्रष्टाचार हो भनेर बुझ्न थालेका छन सर्वसाधारणले पनि !
यदि कुलमान भन्दा सक्षम र अझै त्यो भन्दा बढी काम गर्ने मानिस छ भने ल्याउँदा हुन्छ । तर यति, ओम्नी भट्टहरुकै लाईनका मानिसलाई ल्यायौ भने समाल्न सक्छौ जस्तो लाग्दैन ।